Semalt - Iindlela zokususa i-Profile yakho ye-backlink ngeDawl Data
I-Google ihlaziye abasebenzisi bayo ngokubaluleka kwe-backlink yeenyanga, kodwa siyazi ukuba i-backlinks iyona nto iphambili kwi-injini yokukhangela ephumelelayo . Banceda i-Google, iBing, ne-Yahoo ibone ukubaluleka kwewebhusayithi kunye neeblogi. Uninzi lwabantu abaphikisanayo nokuba benzise i-backlink esebenzayo ukubandakanya iindwendwe okanye akunjalo, kwaye kuyinyaniso ukuba i-backlink ingakuqinisekisa ukuba uphuculo lwewebhu. Ngaphezulu, zinokukunceda ubeke iliso kwaye ulungiselele izixhumanisi ezikhoyo zesayithi lakho - vape eleaf precio.
Makhe sihlolisise amanqaku ambalwa ukuqonda ukuba kutheni kubalulekile ukudibanisa idatha ye-backlink kunye nedatha yokwenza. Oku kuya kusinceda siqonde indlela yokuphucula iinjongo zeejini zethu zokusesha kunye naluphi uhlobo lwezenzo okumelwe kuthathelwe ukunyusa inani labo kwi-intanethi.
Lapha u-Igor Gamanenko, uchwepheshe ophezulu ukusuka kwi-14 (Semalt , uxoxa ngeendlela zokwenza iprofayili yakho ye-backlink ngedatha yokukhwela.
1. Amaphepha aqhekekileyo anama-Backlink
Ngamaphepha aphukileyo kunye neengxelo ze-backlink, unokufumana kalula iphepha elinempophoma kunye ne-backlinks yazo kwaye libuyele kumaphutha angama-4xx nee-5xx. Ukuba ufuna ukuphepha le ngxaki, kufuneka udibanise i-backlinks yakho kumacandelo ahlukeneyo. Ngenye indlela, unako ukubuyisela amaphepha kwiimo ezingama-200 okanye ubuyekeze izinga labo kwi-301. Enye indlela kukuba ungayithumela kwamanye amaphepha ancedo kunye namanqaku afanelekileyo.
2. Imibuzo engekho ekhompyutheni kunye ne-Backlink
Zonke iimpapu ezingenayo i-index kunye ne-backlink zimele zilungiswe ngokufanelekileyo.Bakuvumela ukuba ubone amanqaku abuyisela abasebenzisi kwiiphene ezingama-200. Ukuba le ngxaki ivela, amaphepha akho aya kuba ekhompyutheni, kwaye awukwazi ukuphucula i-injini ye-intanethi yakho kwiwebhusayithi yakho. Ukuba ufuna ukuba onke amaphepha akho afumaneke kwiinjine zokukhangela, kufuneka ulungise inkinga engekho indexed ngokukhawuleza.
3. I-URL eqondisa kwakhona nge-Backlinks
iiWebhsayithi ziguqula izilungiso kunye nomxholo kunye nexesha, kwaye kunokwenzeka ukuba utshintshe i-URL kunye nezokwakheka kwazo njengendlela ekhoyo ngoku. Ukuba ibonisa iphutha le-301, akufanele uvumele iinjini zokutshintshela iqhosha lakho kwiwebhusayithi de loo mposiso isuswe. Kuyi nyaniso ukuba i-backlink nekhasi elithumelayo ayikho imbambano ebalulekileyo, kodwa unokuhlaziya nokutshintsha izicwangciso zayo ukujolisa abaphulaphuli abafanelekileyo. Qinisekisa ukuba uye wasebenzisa itekisi ye-anchor ukwenzela ukwandisa amathuba akho okuphucula kwimiphumo ye-injini yokusesha.
4. Amaphepha angama-Orphaned nge-Backlinks
Amaphepha ezintandane anokuqhuba iindawo ezininzi zezithuthi, kodwa i-webmasters ihlala ibalahlile, ihambisa iindwendwe zazo ezinezibonelelo ezingenasistim kwi-site. Kufuneka uhlolisise amaphepha ezintandane nge-backlink nganye, uqinisekise ukuba onke amaphepha anika ixabiso kubaphulaphuli bakho.
5. Ungavumeli i-URL nge-Backlinks
Zonke ii-URL ezingavunyelwe ngezinye i-backlinks zigqamisa amaphepha achazwe kwifayile ye-robots.txt. Amaphepha anolu hlobo angabangela iingxaki kwiindwendwe, ukunciphisa inani labo kwizinga elikhulu. Kufanele uvumele ukuba iphepha likhawulwe ngokususa kwifayili yakho ye-robots.txt.
6. Ikhasi le-Meta Nofollow nge-Backlinks
Kwingxelo yeMeta Nof elandelelana ne-Backlink, unako ukuchonga amaphepha kunye ngaphandle kweemeta tag kunye nokubonisa iimpazamo kuzo. Unokusombulula ingxaki ngokususa itekisi engadingekile kwiwebhusayithi yakho. Cinga ukufaka i-plugin efanelekileyo ukuphucula ukusebenza nokujonga kwendawo yakho.